पानीजहाजको टुंगो छैन, पानी जहाज कार्यालयले डेढ करोडको गाडी किन्दै ! – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/पानीजहाजको टुंगो छैन, पानी जहाज कार्यालयले डेढ करोडको गाडी किन्दै !
देश कोरोनाको संकटसँग लडिरहेका बेला एक वर्षअघि स्थापना भएको नेपाल पानी जहाज कार्यालयले डेढ करोड रुपैयाँ पर्ने गाडी किन्‍ने भएको छ। २०७५ फागुनमा ललितपुरको एकान्तकुनामा १६ जना कर्मचारीको दरबन्दी सहित स्थापना भएको पानी जहाज कार्यालयले कोरोना संकटको बेलामा एक करोड ४३ लाख ९८ गाडी किन्‍ने प्रक्रिया अन्तिम अवस्थामा पुर्‍याएको हो। यो कार्यालयले गाडी किन्‍नका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना बुधबार प्रकाशित गरेको छ।
ई-बिडिङबाट गरिएको गाडी किन्‍न गरिएको बोलपत्रमा नयाँ नैकपास्थित सिप्रदी ट्रेडिङ लिमिटेडले उक्त गाडी किन्‍ने ठेक्का पाएको छ । यो कार्यालयले २०७६ फागुन ८ गते महँगो मूल्यको सुविधायुक्त चार पांग्रे गाडी किन्‍नका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।कार्यालयले सार्वजनिक खरिद एन २०६३ को दफा २७ को उपदफा २ अनुसार तथा सार्वजनिक खरिद एन २०६३ कझ दफा ४७ अनुसार गाडी खरिद गरिएको जनाएको छ। कोभिड-१९ को संकट बढेपछि अर्थ मन्त्रालयले २०७६ चैत २० गते सवारीसाधन सहितका वस्तु तथा अन्य सामान खरिद नगर्ने गरी बजेट रोक्का गरेको थियो।
पानी जहाज कार्यालयले यो गाडी किन्‍ने टेण्डर २०७६ फागुनमै गरेको थियो। नेपालका कर्णाली, नारायणी र सप्तकोशीसहितका नदीमा पानीजहाज चलाउन सकिने भन्दै २०७५ फागुनमा पानी जहाज कार्यालयको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका थिए ।तर कार्यालय खुलेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि पानी जहाजको अझै टुंगो छैन। नारायणी नदीमा चलाउने गरी निजीक्षेत्रले क्रुज सिप बनाइसकेको छ। तर सरकारी तवरबाट ठोस पहल भएको छैन। सप्तकोशीको केही खण्डमा मोटरबोट चलाइएको छ। तर त्यो पनि पटक पटक बन्द हुने गरेको छ।
भारतले आफ्नो सीमाभित्रमा एक वर्षमा पूर्वाधार बनाउने भन्दै नेपालले त्यही अनुसार पानीजहाज चलाउने योजना बनाएको थियो। गंगा नदीबाट नारायणी हुँदै नेपालसम्म आउने गरी पानीजहाज चलाउने तयारी गरिएको थियो। पानीजहाजलाई नारायणी नदीको दासढुंगासम्म ल्याउन सकिने अध्ययन टोलीले बताएको थियो। तर अहिलेसम्म यसको प्रक्रियाबारे केही जानकारी सरकारले दिएको छैन। ३ मिटर गहिराई र ६० मिटर चौडाईको नदीमा १५ सय मेट्रिक टन भारवहन क्षमताका पानीजहाज चलाउन सकिने बताइएको थियो।
पाँच सय टन क्षमताका पानीजहाज नेपाल आउनसक्ने अनुमान गरिएको थियो। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली राष्ट्रिय झण्डासहितको पानीजहाज महासागरमा चलाउने बताएका थिए। त्यसपछि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि उनले २०७५ मै पानी जहाज चलाउने बताएका थिए। ‌ओलीले पानी जहाज र रेल दुवै सञ्‍चालन गर्ने बताए पनि अझै यी दुई कुराको ठोस कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।